Mpitantana tetik'asa ho an'ny tsy miankina | Famoronana an-tserasera
Tetik'asa ho an'ny mpiasa mahaleo tena
Ny asa mahaleo tena dia mety hampahory Eny, mety miasa amin'ny tetikasa samihafa ianao ho an'ny olona samihafa sy ekipa samihafa. Aza adino anefa ny tenanao, tsy mila Freelance ianao Mba hitrangan'izany aminao, na iza na iza mandahatra na mamolavola drafitra dia manana hevitra hatrany amin'ny fantsona ary matetika ny tsirairay amin'izy ireo dia miaraka amina ekipa sy tanjona hafa.
Raha te-hanavao ireo tetik'asa rehetra ireo izahay miaraka amin'ny fiaraha-miasa misy azy ireo nefa tsy maty am-panandramana, dia asaina mampiasa mpitantana tetik'asa ianao, ary raha azo atao dia mifandray amin'ny portfolio-nay koa izany. Ny fampiasana mpitantana tetik'asa dia mety hanamora ny andavan'andro antsikaRaha izany, raha voalamina tsara, dia mahavita ny zava-drehetra mandeha ho azy, afa-tsy ny asa.
Mpitantana tetik'asa iray afaka manampy anao hitantana:
Statistika sy isan-jato
Ny ora fiasanao
Daty sy fanaterana
Mailaka mandeha ho azy
Zavatra isan'andro isan'andro a mahaleotena, azo antoka maka fotoana lavitra antsika izy ireo ary manome hafanana an-doha antsika izy ireo.
Ahoana no ahazoana mpitantana tetikasa?
Androany, amin'ny fivarotana an-tserasera amin'ny script amin'ny php Hahita mpitantana tetik'asa ara-toekarena bebe kokoa ianao. Raha vao tratra dia tsy mila afa-tsy:
Fampahalalana misimisy kokoa | Antony 15 hahatongavana ho mpamorona tsy miankina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » PHP » Tetik'asa ho an'ny mpiasa mahaleo tena
Ohatra iray amin'ny fivarotana script php rehetra ...
Sergio Rodenas dia hoy izy:
Hiteny aho fa i Codecanyon dia iray amin'ireo ohatra malaza indrindra ...
Valiny tamin'i Sergio Ródenas
Te hahafantatra an'izay fivarotana script php olona mividy an'io karazan-javatra io koa aho.
Wojoscripts dia tranokala iray izay ahitanao ireo karazana script rehetra ireo ...